FANAMAFISANA NY MAHA IZY ARA-KOLONTSAINA : Navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny boky « Ny Fiandohan’ny Malagasy » – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 9:22
Accueil/Kolontsaina/FANAMAFISANA NY MAHA IZY ARA-KOLONTSAINA : Navoaka tamin’ny fomba ofisialy ny boky « Ny Fiandohan’ny Malagasy »
Tontosa omaly tao amin’ny renivohitry ny Faritra Vatovavy, tao Mananjary, ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ny boky « Ny Fiandohan’ny Malagasy » rehefa nanaovana fikarohana nandritra ny fotoana naharitra. Nitarika ny lanonana tany an-toerana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, notronin’ny Praiminisitra Ntsay Christian, ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina Lalatiana Andriatongarivo ary ireo tomponandraiki-panjakana samihafa ao amin’ny Faritra Vatovavy.
Tsy firenena ny firenena iray raha tsy manana kolontsaina fantatra sy miroborobo. Ny kolontsaina no mamaritra ny maha-izy azy ny vahoaka iray. Ao anatin’ny tanjona napetraky ny Fitondram-panjakana tamin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ary tafiditra ao anatin’ny « contra-programme » ny hanamafy ny maha-izy azy antsika malagasy (renforcer l’identité nationale). Izany indrindra no maha zava-dehibe ny namoahana ny Boky “Ny Fiandohan’ny Malagasy”, taorian’ny fanadihadiana sy fikarohana lalina notontosain’ny Fitaleavana miandraikitra ny Maha-izy ara-kolontsaina na ny Direction de l’Identité Culturelle eo anivon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina.
Ny tanjona tao anatin’ny famolavolana ity boky ity, araka ny fanazavana, dia ny fanehoana ny hambom-po maha Malagasy, ny fandravonana ireo voka-pikarohana marolafy, ny fampitana fahalalana mikasika ny maha Malagasy amin’ny taranaka mifandimby ary ny fandravana ny hevi-diso mikasika ny fiandohan’ny Malagasy. Nandalo dingana ny fikarohana izay vao nahatafavoaka izao vokatra izao. Tafiditra tao anatin’izany ny fikirakirana ireo karazana tahirin-kevitra samihafa, ny fakan-kevitra natao tamin’ireo mpitahiry ny vakoka sy ireo sokajin’olona manana fahalalana momba ny fiandohana, ireo mpahay tantara sy ny maro hafa. “Misy fizarana telo lehibe ny boky : ny voalohany dia ny fiandohan’ny anarana hoe Madagasikara sy Malagasy izay nanehoana ireo anarana samihafa niantsoana ny nosy sy ny mponina ao aminy, ny faharoa dia ny fahatongavan’ny sokajin’olona samihafa teto amin’ny nosy araka ny vanim-potoana nifandimby ary ny fahatelo dia ny haren-tsaina nolovaina izay nanehoana ny teny, ny fomba fiaina toy ny fianjaika sy ny foto-pivelomana, ny finoana ary ny fomba amam-panao”, araka ny fanazavana.
Naharitra roa taona ny asa nahafahana namoaka izao angom-pikarohana izao, hoy ny fanazavana. Araka izany, angom-pikarohana no hiantsoana ity vokatra ity satria maro tokoa ireo fikarohana momba ny fiandohan’ny Malagasy, ary ny fandravonana izany anaty firaketana iray sy ny fandalinana izany no natao tanatin’izao boky izao. Tsy amidy fa zaraina maimaimpoana izao boky ara-kolontsaina sy ara-tantara izao ary haparitaka amin’izay sehatra rehetra ahafahana manaparitaka izany, toy ny eny anivon’ny sekoly isan’ambaratongany sy any amin’ireo tranomboky samihafa, hoy ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo.
Araka ny fanazavana dia nosafidiana manokana i Mananjary hamoahana izao boky izao noho ny fananany harena ara-tantara mifamatotra amin’ny fiavian’ny Malagasy. Zava-dehibe, hoy ny Filoha Andry Rajoelina, ny famoahana ity boky mirakitra ny « Fiandohan’ny Malagasy » ity, izay misy hifandraisany tanteraka amin’ny rohin’ny tantara sy ny kolontsaina izay tokony ho fantatry ny vahoaka. Hipetraka ho tantara araka izany ny famoahana azy, hoy hatrany ny Filoham-pirenena.
FIFANARAHANA ALMA/CUA : Endriky ny fambotriana Firenena nataon-dRavalomanana
Raharaha Lavaraty –Tafaverina ny omby 83 : « Tsy maintsy azo ireo dahalo nandatsa-drà ireo miaramila sy sivily », hoy ny Jly Rakotonirina Richard